Ụlọ Microsoft Office 2021 N'ogbe & Onye Mmụta (PC) Onye nrụpụta na onye na-ebubata |GK
Kere ihe.Na-ele anya n'ihu.Ọ dị mfe iji.
Ntinye ego oge ndụ na teknụzụ okike, Office 2021 Home & Student bụ oche ahịrị ihu ọhụrụ gị maka ọdịnihu nke ihe ọhụrụ Microsoft.Site na ọgụgụ isi wuru ewu, ụlọ nrụpụta ọhụrụ a na-ewepụta nkwa Microsoft na-aga n'ihu n'ịkwanye onye ọrụ ọ bụla ikike teknụzụ nwere ikike, nkeonwe yana ọgụgụ isi karịa mgbe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọchụnta ego, nwa akwụkwọ ma ọ bụ onye nwe obere azụmaahịa, ike gwụrụ gị na ọ dị gị ka ị na-eji ngwa ochie?Kwalite gaa na ngwa kachasị ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ taa!Nweta ụdị ngwa kachasị amasị gị yana mgbakwunye ọhụrụ ọhụrụ iji mee ka ndụ dịkwuo mfe.Mee ka afọ ju ndị ahịa na ndị nkuzi site n'inwe ike ịmasị ha na mpaghara ọ bụla!
Chọpụta Microsoft Office dịka a hụtụbeghị ya na kọmpụta nkeonwe nke Windows niile.Na-atụ anya ihe imewe mara mma, ịrụ ọrụ ngwa ngwa, mmeghari ihu ọhụrụ maka imewe, yana njiri mara oge ọ bụla na-enweghị efu n'ihi ụgwọ, ndenye aha, ma ọ bụ nnweta.
Welie oge nkeonwe gị ugbu a na ị nwere ohere na Office 2021 Home & Student na desktọpụ gị ma ọ bụ laptọọpụ gị, yana ọbụna mbadamba Windows!Emebere ngwa ọ bụla ma na-emelite ya na ahịa asọmpi taa site n'aka nnukwu kọmpụta-software na-eduga nwere akụkọ ihe mere eme ọhụrụ dị egwu.
Nhazi ọhụrụ ahụ dị mfe iji, na ntinye aka na-enweghị ntụpọ na-enye gị ohere ịmekọrịta ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla.Ngwa kpochapụwo na-abịa na Microsoft Office 2021 bụ Okwu, Excel na PowerPoint.Site na iji ikike na ngwa gụnyere, ọ dịbeghị mfe ịmalite na Microsoft Office.
Emebere Office 2021 maka ọgbọ na-eji ọrụ ha akpọrọ ihe.Ọ bụghị naanị ụlọ nrụpụta ihe, ọ bụ ngwa agha nke imepụta ihe.Bulite ngwa ọrụ dị ike site na iji nweta-aga wee gbadaa azụmaahịa ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ!
Ụdị 2021 emelitere nke Microsoft Okwu, Excel na PowerPoint bụ ihe agụnyere na ụlọ ọhụrụ 2021 Office & Student.Pịa ngwaahịa dị n'okpuru ka ịmatakwu ihe dị ọhụrụ:
Ngwa nhazi okwu na-amasị gị iji maka edemede na akwụkwọ alaghachila, mana oge a ka ọ dị mma karịa mgbe ọ bụla.Site na njirimara ọhụrụ na-eme ka ide ihe na-ejikọta ọnụ n'agbanyeghị emume - ma ọrụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ ụlọ - ejiri aghụghọ dị mma gbatịkwuo ngwa ọkacha mmasị gị!
Mee ihe n'ime obere oge karịa ka ọ dị na mbụ.Ngwa niile ịchọrọ maka ọrụ ọ bụla, n'aka gị!Jiri mmanya “Gwa m” ka ịchọta atụmatụ, ma tinye ha na ngwa ngwa ịnweta ngwa ngwa maka ịnweta ngwa ngwa.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị emelitere.Mee ka ihuenyo dị mfe n'anya gị site na iji ụdị ọchịchịrị ọhụrụ emelitere.Ugbu a, ibe gị na-agbakwa ọchịchịrị, ị nwere ike ịbanye mode Focus ka ịgbanwee agba n'azụ na-enweghị ihe ndọpụ uche.
Ka mma gụpụta ụda olu.Ederede ọhụrụ na ụda okwu abịarutela Okwu 2021. Nwee anụrị olu dị elu na nke nwere nghọta iji nyere gị aka ịghọta akwụkwọ nke ọma.Ee, ọ na-arụkwa ọrụ na Line Focus ọhụrụ na Immersive Reader!
A na-aza ajụjụ n'oge a.Enweghị mmapụta sidebar ọzọ.Azịza ya dị ugbu a n'ahịrị yana okwu, yana @ kwuru na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abịa.
Gbanwee akwụkwọ gị ka ọ bụrụ weebụsaịtị.Microsoft Sway na-enye gị ohere ịmepụta ibe weebụ na 1 pịa site na akwụkwọ Okwu gị.Họrọ site na nhọrọ nhazi dị iche iche, ihe ngosi, wee dezie na Sway.
Microsoft Excel 2021 bụ ngwa mgbasa ozi kachasị zuru oke yana dị mfe iji n'ahịa taa.Were njiri mara ọhụrụ ndị a niile emebere maka ndị dị ka gị onwe gị, were nkà nyocha data gị gbagoro agbago!
Excel 2021 na-agbatị oke nke ihe echeburu na ọ ga-ekwe omume.Ị nwere ike ugbu a gafere echiche wee mepụta mgbagwoju anya, akwụkwọ mgbasa ozi ọkachamara na mfe!
Jiri data gị zuru oke.Nyochaa ozi ngwa ngwa na ngwa ngwa.Ndị mmadụ sitere na ọrụ ọ bụla ma ọ bụ obodo gburugburu ụwa nwere ike nweta ikike ime mkpebi ka mma dabere na nchoputa sitere na mpempe akwụkwọ Excel ha!
Ọrụ ọhụrụ.Ọrụ ọhụrụ dị ike na-enye gị ohere ịmegharị ma jiri data gị rụọ ọrụ n'ụzọ ndị ọzọ.Ọrụ ewepụtara ọhụrụ gụnyere LET () na XLOOKUP() na Excel, yana ọtụtụ ndị ọzọ na-abịa!
Nkwụsi ike na nkwalite arụmọrụ.Ịrụ ọrụ nke ọma nke Excel na-eme ka ịrụ ọrụ na nnukwu nhazi dị mfe karịa ka ọ dị na mbụ, n'ihi ọsọ ọsọ ya na mgbako na igodo.
PowerPoint 2021 zuru oke maka ndị chọrọ imepụta ihe ngosi na-adọrọ mmasị, ma kesaa ha n'ụzọ na-enweta nlebara anya karịa ka ọ dị na mbụ.Site na nkwalite Microsoft n'onwe ya mere yana yana atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere - ị nweghị ike ịgahie!
Bụrụ ihe okike, bụrụ ọkachamara.Ihe ngosi kachasị mma bụ ebe ị nwere ike ikwe ka echiche gị na-aga.PowerPoint 2021 na-enye gị ohere ịme nke ahụ, mana ọ ka na-ejigide ụda ọkachamara maka ụdị ọnọdụ niile.
Nna-ukwu nke nka.Ihe ngosi kacha mma mgbe ha na-esi n'otu ihe na-aga n'ọzọ n'ụzọ na-atọ ụtọ.PowerPoint 2021 na-enye gị ohere idobe ihe ngosi gị ka ọ dị ọhụrụ na nke na-atọ ụtọ site na iji ngwaọrụ, ihe ngosi, ntụgharị!
Fanye akara ngosi ọhụrụ na ụdị 3D.Jiri ọbá akwụkwọ nke akara ngosi SVG rụọ ọrụ iji mee ka ọrụ gị pụta ìhè na ndị ọzọ!Họrọ n'etiti ndị emebere nke ọma, ma ọ bụ bulite nke gị ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta okike.
PowerPoint 2021 na-eme ka a nụ ya.Ugbu a, ihe ngosi gị nwere ike inwe mmetụta nkeonwe karịa na ndekọ ndekọ sitere na mmemme ahụ n'onwe ya - ọ dịghị mkpa ịchọta ebe mpụga ma ọ bụ tinye oge iji dekọọ onwe gị na ngwa dị iche!
Họrọ Office kacha mma maka gị
Ụlọ Microsoft Office 2021 & Student zuru oke maka ụmụ akwụkwọ n'ụdị ọ bụla, yana obere ndị nwe azụmaahịa na ndị ọchụnta ego chọrọ iji nguzozi-ndụ ọrụ na ọkwa nkeonwe.Site na njiri mara ya nke na-agaghị ahapụ gị n'azụ na klaasị ma ọ bụ na tebụl gị n'enweghị enyemaka, ọ nweghị ihe kpatara na onye ọ bụla agaghị enwe ụlọ a na PC ha!
Nkwekọrịta Microsoft Office 2021 Home & Student zuru oke maka ndị chọrọ iji ihe ndị dị mkpa n'ụzọ dị ọnụ ala.Ị ga-enweta ohere ndụ, yana atụmatụ niile kachasị ọhụrụ na-enweghị itinye ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ!
N'ezie mbipụta a na-abịa na ụfọdụ mgbochi, ya mere jide n'aka na ị ghọtara ihe ha bụ tupu ịme mkpebi na ma ọ bụ nhọrọ ziri ezi maka mkpa gị.Ọ bụrụ na ịchekwa ego abụghị otu n'ime ha, anyị na-atụ aro ka ịlele onyinye anyị ndị ọzọ, dị ka Office 2021 Ọkachamara.
Nke a bụ usoro opekempe chọrọ maka ịwụnye ụlọ a.Anyị na-akwado ịgafe ihe ndị a iji kwenye onwe gị ahụmịhe na-atọ ụtọ na Ụlọ & Mmụta Office 2021:
Processor: 1.6 GHz ma ọ bụ ngwa ngwa, 2-core processor.
Ebe nchekwa / RAM: 4 GB ma ọ bụ karịa maka 64-bit;2 GB ma ọ bụ karịa maka sistemụ dabere na 32-bit.
diski ike: Opekempe ohere diski ike dị 4GB ka achọrọ na harddrive nwụnye.
Sistemụ arụmọrụ: Windows 10 ma ọ bụ Windows 11 achọrọ maka Office 2021.
Eserese: Ngwa ngwa ngwa eserese eserese chọrọ DirectX 9 ma ọ bụ karịa, yana WDDM 2.0 ma ọ bụ karịa na Windows 10.
Ụdị NET: Ụfọdụ atụmatụ nwere ike ịchọ ka etinyekwa .NET 3.5 ma ọ bụ 4.6 na karịa.
Sistemụ ndị ọzọ chọrọ
Ọrụ ịntanetị chọrọ njikọ ịntanetị.
Enwere ike ịchọrọ akaụntụ Microsoft.
Achọrọ ngwaọrụ enyere aka ka ọ jiri ọrụ multitouch ọ bụla.
Ọrụ na eserese nke ngwa agụnyere nwere ike ịdị iche dabere na sistemụ gị.
Nke gara aga: Ụlọ na azụmahịa nke Office 2021 Maka ngwungwu igodo mkpọsa Windows 2021 hb DVD
Osote: Igbe DVD rụọ ọrụ n'ịntanetị Microsoft Office 2021 Ọkachamara maka PC
Microsoft Office 2019 efu
Ụlọ ọrụ efu 2019
Ụlọ ọrụ 2019 32 Bit
Ụlọ ọrụ 2019 Esd
Nwa akwụkwọ ụlọ 2019 Office
Azụmahịa Office 2019
Ụlọ ọrụ Microsoft 2019
Ọkachamara Kọmputa Kọmputa Kọmputa Plus O...
Ọfịs 2019 Ọkachamara Plus Retail igbe n'ịntanetị...